Samachar Batika || News from Nepal » आदिम कालका मान्छेले के खाए, कुन समयमा कुन अन्न उब्जाउ भयो ?
आदिम कालका मान्छेले के खाए, कुन समयमा कुन अन्न उब्जाउ भयो ?
जतिबेला मान्छे शिकारी युग कटेर सभ्यताको सुरुवात तिर लाग्यो । त्यसपछि मान्छेमा बिस्तारै शि’कार मात्रै नभएर खानाको सञ्चितिको अवधारणा समेत विकास हुन थाल्यो । पृथ्वी ४ पटक हिम युगमा पुग्यो र ३ पटक हिमानी युगमा गयो भन्ने मान्यता राखिन्छ । हिम युगमा रहेको पृथ्वी जब तातो हुँदै जान्छ त्यसपछि जीव जन्तुको विकास हुँदै जान्छ । सोही अनुसार खाना र अन्य सभ्यताको सुरुवात हुन्छ र जब त्यो वातावरणसँग मान्छे घुलमिल हुन सक्दैन । त्यसपछि भने मान्छे बिस्तारै अस्तित्वबिहीन बन्दै जान्छ ।
जब पृथ्वी न्यानो हुन थाल्यो । गर्मीमौसममा पृथ्वीको तापक्रम ६० देखि ८० डिग्री फरेनहाइटसम्म पुग्दा मान्छेले खानाको विभिन्न तरिकाहरू अपनायो । बिस्तारै मौसम वातानुकुलित हुँदै गएपछि मान्छेमा शिकार गर्न गाह्रो र जम्मा गर्न सजिलो हुन थाल्यो । त्यसपछि भिभिन्न प्रजातिका अन्न एवं फलफूलहरू लगाउन थालियो ।
मान्छेले आफ्नो सारथिको रूपमा कुकुर पाल्न थाले । जुन सबैभन्दा पहिलेदेखि पाल्न सुरु गरिएको पशु थियो । त्यसपछि बिस्तारै अन्य पशुहरू पनि पाल्न सुरु भयो । पशुपालनभन्दा अघि नै मान्छेले कृषिको विकास गरेर विभिन्न फसल उत्पादन सुरु गरिसकेको थियो ।
प्रकाशित मिति १६ बैशाख २०७८, बिहीबार ०३:२४